Galmee barruu fi wardiicha lameenuu bani.
Naannoo wardii garagalchuu barbaadduu fili.
Bakkicha filatameetti akeekiiti qabduu hantuutee dhiibi. Yeroo gabaabaaf qabduu hantuutee dhiibiti tursiiti, achii naannoocha garakeessa galmicha barruutti harkisi.
Yoo galmeewwan walcinaatti hin argaman tahe, jalqaba akeektuu hantuutee gara qabduu galmee ga'umsaatti harkisi. Qabduu hantuutee gad qabdee ta'uuke itti fufi.Galmichi ni agarsiifama, fi akeektuu hantuutee galmee keessaa siiqsuu ni dandeessa.
Erga takkaa qareen bakka ati naannoo wardii galchuu barbaaddu teessifamee, qabduu hantuutee gad lakkisi. Naannoon wardii akka wanta OLE tti saagama.
Yeroo kamiyyuutti wanta OLE filattee gulaaluu ni dandeessa.
Wanta OLE gulaaluuf, isa irratti lama cuqaasi.
Akka filmaataatti, wanta filiitii baafata halqaraa irraa Gulaali - Wanta - Gulaalifili yookiin Gulaali fili. Wanticha godayyaa dhuunfaa isaa galmicha barruu keessaa gulaali, garuu sajoowwanii fi ajajoota baafataa wardiiwwaniif barbaachisani ni argita.
Wanticha OLE galmee maddaa banuuf Bani fili.
Title is: Naannoowwan Wardii gara Galmeewwan Barruutti Garagalchuu